स्मार्ट शहरले एलईडी भिडियो विज्ञापन स्क्रीन पर्खालको द्रुत विकासलाई बढावा दिन्छ - इनडोर आउटडोर नेतृत्व भिडियो प्रदर्शन स्क्रीन निर्माता
आउनुहोस्, हालका बर्षहरूमा एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रिन र परम्परागत एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रिनको बीचको तुलनाको बारेमा कुरा गरौं
1. को बिजली खपत एलईडी भाडा विज्ञापन प्रदर्शन कम र कम हुँदैछ, र यो अधिक र अधिक पर्यावरण अनुकूल छ
पारंपरिक एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रीन पोइन्ट P5 बाट p37.5 मा स्पेसिंग, ठूलो स्क्रीन, ठूलो खपत. प्रारम्भिक स्थापित स्क्रीनहरू, किनभने उत्पादन शक्ति बचत टेक्नोलोजी परिपक्व छैन, अधिक बिजली खपत, तर अब एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रीन मानक गर्न सकिन्छ, मानकीकृत, ठूलो उत्पादन, किनभने अधिक परिपक्व औद्योगिक वातावरणमा, पछिल्लो प्रदर्शन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, शक्ति बचत र प्रेरण समायोजन टेक्नोलोजी, एकाई पावर खपत कम छ, र चमक स्वचालित रूपमा परिवेश प्रकाश अनुसार अधिक समायोजन गर्न सकिन्छ अधिक ऊर्जा बचत.
2. राम्रो विज्ञापन प्रभाव
परम्परागत एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रीन एक अलग ठूलो टिभी जस्तै छ, प्रबन्धकहरूले सिnch्क्रोनस र एसिन्क्रोनस विधिहरू मार्फत मात्र एकल स्क्रीन नियन्त्रण गर्न सक्दछन्. अब एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रीन टर्मिनल महसुस गर्न सक्षम भएको छ. वायरलेस संचार र ठूलो-स्तर क्लस्टर नियन्त्रण समारोहको कारण, टर्मिनलको संख्यामा कुनै सीमा छैन. प्रबन्धकले सबै टर्मिनलहरूलाई नियन्त्रण प्लेटफर्म मार्फत टाढाबाट नियन्त्रण गर्न सक्दछ. दर्शकहरूले धेरै बिन्दुहरूमा प्रदर्शनीको सामग्री हेर्न सक्दछन्. यो एक नेटवर्क र व्यवस्थित संचार प्लेटफर्म हो, जसले त्रि-आयामिक संचार प्रभाव प्राप्त गर्न सक्छ.
3. अनुप्रयोग क्षेत्र विस्तार हुँदैछ
परम्परागत एलईडी इलेक्ट्रोनिक स्क्रीन विज्ञापन वरिपरि एकतरफा विकास गरीरहेको छ. अब LED इलेक्ट्रोनिक स्क्रीन जीवनको लागि विकास गर्दैछ. उदाहरण को लागी, नेतृत्व रनवे, नेतृत्व मोबाइल फोन, नेतृत्व फोहोर गर्न सक्छन्, नेतृत्व जुत्ता, नेतृत्व इयर स्टडहरू र यस्तै